Cloud Storage sy tantara mampihoron-koditra hafa | Avy amin'ny Linux
Cloud storage sy tantara mampihoron-koditra hafa
caesasol | | fampiharana
Volana vitsivitsy lasa izay, elav dia namoaka lahatsoratra hevitra momba ny mahatsara, ary indrindra ny maharatsy ny fitahirizana rahona. Vao haingana aho no nanamafy ny fomba fijeriny tsy nisy fanaintainana be.
Ankoatra ny zavatra hafa, nanipika i Elav ny Inona no hitranga amin'ny angon-drakitra raha toa ka nanjavona tampoka tamin'ny fomba nitovizan'ny Megaupload io serivisy io?
Tsotra izany, very ny angon-drakitrao sy ny zavatra hafa rehetra notehirizinao tao anatiny ary azo inoana fa tsy nisy ny fahitanao azy.
Raha jerena izany dia noheveriko fa raha mbola tsy mitahiry serivisy izay ampiasaina amin'ny tanjona tsy dia fahita loatra amin'ny NSA aho tahaka ny nitranga tamin'i Megaupload ary tato ho ato rakitra mafanaNy rakitra nataoko dia tsy voaro amin'ny fihazonana ny banga sy Obama, saingy araka ny nahitako azy dia diso aho.
Megacloud, serivisy fitehirizana rahona izay nanolotra fitehirizana rahona 16GB maimaimpoana, nanidy ireo mpizara azy nefa tsy nanao fampandrenesana na fampitandremana, tsy nahazo mailaka mihitsy aho, na oviana na oviana nisy bitsika momba an'io. Nanjavona tsy namela afa-tsy ny fahatsapana ny tsy fahatokisana virtoaly.
Rehefa nandinika bebe kokoa momba an'io raharaha io aho dia hitako fa tsy io ihany no karazana nanjavona an'ity karazana ity saika tampoka tampoka tsy nisy antony mazava nahatonga izany.
Nirvanix, vahaolana rahona izay nieritreretako ny tetikasa famoahana lahatsoratra, fanabeazana ary mozika izay niarahako niasa, nanidy varavarana manome fampandrenesana ho an'ny mpanjifany momba ny fanidiana azy ireo, manome roa herinandro monja mba hahazoana ny angon-drakitr'izy ireo.
Ary tsy orinasa kely na tsy manana traikefa io, fa natao ho sehatra virtoaly ho an'ny fanombohana am-polony ary orinasa antonony am-polony hafa izay miankina amin'ny serivisy marobe sy azo idirana miaraka amin'ny traikefa tsy latsaky ny fito taona.
Na dia iray aza amin'ireto tantara roa ireto no nifarana tamin'ny lozam-pifamoivoizana be dia be, mamela antsika mpampiasa rahona izy io Copy miaraka amin'ny horohoro noho ny fanjavonan'ny data tampoka teo amin'ny rahona.
1.1 Ny afovoany
1.2 Ny p2p ary mahavita tena
Na dia misy tranga mahatsiravina toy izany aza dia tsy ny rahona maizina rehetra any an-danitra. Misy safidy hafa azo antoka, azo antoka ary misokatra rahona misokatra.
Miankina amin'ny mpizara afovoany izy ireo, izay teboka malemy ho azy, saingy manana ny lazany ampy izy ireo hatoky ny angoninay amin'ireto vahaolana ireto:
Angamba amin'ireo roa farany ianao dia tsy maintsy miahiahy momba ny NSA, fa rehefa manana ara-dalàna amin'ny fisie ianao dia tsy misy atahoranao.
Ny p2p ary mahavita tena
Na dia vitsy aza ny mpilalao ao amin'ity sokajy ity, izy ireo no azo itokisana indrindra, satria mitovy amin'ny torrent, ny rakitra dia ampifanarahana amin'ny solo-sainanao solo-tena, fa tsy mandalo mpizara izay tsy azonao idirana aloha.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Cloud storage sy tantara mampihoron-koditra hafa
Izaho dia mihoatra ny sekoly taloha raha ny momba ny fanohana na ny fitehirizana. Manana Dropbox aho satria niaraka tamin'ny 50 GB nandritra ny 2 taona ny smartphone. Ny iray dia maniry ny maka sary any an-tsaha sy toerana maro, ary ho an'ny fanamorana dia manana an'io ihany koa aho amin'ny ambiny. Fa angona sy mifandraika, tsy adala! Ho an'izany dia manana toerana malalaka amin'ny kapila mafy sy pendrive aho, amin'izao fotoana izao dia tsy manome ahy kapila mafy ivelany, io no manana fampiasana an-trano bebe kokoa na latsaka.
Heveriko fa mitovy aminao ihany. Ny angon-drakitra, ny nomaniko ho solon'izay, izany rehetra izany ... Tsy matoky olon-kafa ankoatry ny tenako hiaro azy ireo aho, eny fa na dia amin'ny VPS ahy aza, dia izany no mahalasa saina ahy 🙂
Tent. 78 dia hoy izy:
Ny zavatra tsara indrindra dia ny fanananao amin'ny mpizara anao ny angon-drakitrao, mba hialanao amin'ny alahelo ary ireo orinasa dia afaka milaza aminao izay azonao atao na tsy azonao atao amin'ny angon-drakitrao.
Valiny ho an'i Carpanta.78
Tena tokony hatoky Dropbox ve ianao? http://www.elladodelmal.com/2013/12/lo-que-se-comparte-por-dropbox-al.html Ao amin'ny lisitra, tsy nahita Copy aho.
Heveriko fa tsara vintana aho fa tsy manana angon-drakitra fitsikerana ao. Fa mahaliana tokoa ny fandinihanao. Ho fantatro fa ny serivisy hafa dia malemy loatra amin'ny fiarovana anao.
Tsara ny fandinihanao.
Mieritreritra aho fa ny manofa VPS manokana dia mamorona rahona misy antsika miaraka amin'ny OwnCloud sy ny toy izany.
Dropbox matoky? - Tsy adala, nanana traikefa ratsy tamin'ny kaontiko aho, ary ny momba ny fanampiana taorian'ny fandefasana mailaka x dia heveriko ho tena ratsy.
Mampanantena ny SpiderOak ary i Wuala koa, fa rehefa mandroso ny teknolojia dia tokony handroso miaraka amin'izany isika. Heveriko fa ny rahona dia manome fotodrafitrasa maro raha ny amin'ny fananana toerana azo antoka sy tsy azo aleha na aiza na aiza, fa araky ny voalazan'ny Noctuido compact etsy ambony dia tsy hevitra ratsy sy / na azo ampiharina ihany koa ny famoronana kopia marobe amin'ireo kapila mafy ataontsika.
Raha izaho manokana dia nampiasa Dropbox aho, taorian'izay, nandefa mailaka aho hanafoanana ny kaontiko, nankany amin'ny Ubuntu One aho ary avy eo tamin'ny alàlan'ny referansa dia azo atao ny mahazo habaka disk betsaka nefa tsy fantatro akory izay ataon'ireo canonika amin'ny angon-tsika, ohatra iray amin'ny ity ny fiampangana an'i Stallman momba ny Ubuntu misy malware sy spyware. Eny, amin'ny farany dia mpampiasa tsotra fotsiny aho izay mampiasa Ubuntu noho ny fampitaovana sy ny PPA.
Soso-kevitra: Owncloud, Wuala ary Bitcasa 😀
Ao amin'ny politikan'ny tsiambaratelo an'ny UbuntuOne, manana ny andininy izy ireo fa na izy na antoko fahatelo hafa dia mahazo alalana na miditra amin'ireo rakitrao, ary hafindra any amin'ny didim-pitsarana ihany. (NSA)
Rehefa manana na manome fahazoan-dàlana ny zava-drehetra tahiriko ao anaty rahona aho dia tsy miraharaha an'io karazana antsipirihany io.
Owncloud dia mbola vatosoa fitahirizana rahona, ny lesony dia ny tsy fisian'ny vidin'ny fifaninanana amin'ireo mpizara izay manolotra anao efa napetraka manokana.
Mampiasa ny SkyDrive fotsiny aho amin'ireo zavatra ireo, ary Mediafire miaraka amin'ny 4shared. Ho an'ny zavatra hafa rehetra, manana kapila mafy 40 GB aho ary manangana cyberlocker manokana miaraka amin'ny OwnCloud.
Mampiasa Google Drive aho, na dia tiako aza izany amin'ny Linux (tiako ihany koa raha misy olona manao seranana).
Misy fampifanarahana tsy ofisialy, saingy lavitra ny misy an'ny Windows, izay ofisialy. Farafaharatsiny rehefa nanandrana azy aho dia tena fototra izany, tsy fantatro raha nanatsara izany izy ireo. http://xmodulo.com/2013/10/mount-google-drive-linux.html
Ny rakitrao manokana tsy zava-dehibe dia misy zavatra kely ao anaty dropbox, fa ny tena zava-dehibe amin'izao fotoana izao ao amin'ny kapila miandry ny mametraka ny mpizara rakitra ahy manokana.
Ka azo antoka ny zava-drehetra tsy misy tsy ampoizina.
omarnose dia hoy izy:
Mampiasa box.com aho satria afaka miditra amin'ny nautilus na mpikaroka rakitra windows amin'ny alàlan'ny webdav.
Ary raha manokatra ny kaontinao amin'ny smartphone Android ianao dia manome tahiry 50 GB ho anao i LG. Tombony iray hafa dia ny ahafahanao mifehy ny lahatahiry amin'ny kaonty hafa, ka amin'ny kaonty lehibe dia azonao atao ny mitantana ny hafa.
Ny fatiantoka dia ny amin'ny kinova maimaim-poana ireo rakitra dia tsy afaka lehibe kokoa noho ny 250MB.
Ary mazava ho azy ny tsy fahazoana antoka ny tsy fahalalana izay hitranga sy izay hitranga amin'ireo rakitrao.
Valiny tamin'i OmarNose
Na ahoana na ahoana dia tsy tokony hatao raha tsy mahafehy anao ny computing anao. Izany no antony fanao mampidi-doza ny fitokisana ny angon-drakitrao, indrindra raha mora tohina, amin'ny mpizara ivelany. Androany dia misy fitaovana elektronika mahery vaika (sy tsy lafo) hitahirizana angona be dia be raha mila mitondra izany aminao ianao. Aleo mampiasa fitadidiana toy ny pendrive na micro SD, ary ampifanaraho amin'ny solo-sainanao manokana. Hatramin'izao, io no fomba azo antoka indrindra amin'ny fananana mandrakariva, na aiza na aiza, ny rakitrao havaozina ary afaka ovaina na aiza na aiza. Fampiharana iray tena mora ampiasaina amin'ity dia ny Unison.
Jon mitroka dia hoy izy:
Ho an'ny zavatra hafa rehetra, Tahoe-LAFS amin'ny I2P.
Valiny tamin'i Jon Burrows
Ho an'ny angona tena saro-pady, heveriko fa ny serivisy maimaimpoana toy ny Dropbox sy ny Google drive dia tsy ampy, raha te hanana backup ianao amin'ny mpizara ao anaty rahona dia misy safidy tsara hanakaramana mpizara ao amin'ny Rackspace na Amazon.
Izaho manokana dia mampiasa Dropbox ka ny sary raisiko amin'ny iPhone dia mandeha mivantana amin'ny Linux, ary ny Google Drive dia saika ampiasako azy hitazomana ny CV-ko raha sanatria misy fotoana mety hiseho 🙂
Heveriko fa ny serivisy toy ny megacloud dia tsy nampoizina firy, raha mijery amin'ny google isika dia tsy serivisy goavambe ary tsy dia malaza loatra, ny fahafaha-manakatona azy dia avo dia avo, amin'ity lafiny ity dia mieritreritra aho fa ny rahona toa ny dropbox, google drive fotsiny no hatokisanao. , Amazon, orinasa goavambe misy fotodrafitrasa voamarina sy làlan-kaleha, fa tsy amin'ny serivisy izay tsy fantatsika raha noforonin'ireo mpankafy iray izay tsy mandoa ny vps amin'ny faran'ny volana ary mampiato azy ireo
baoritra dia hoy izy:
Nahaliana ahy foana ny momba ny Linux, satria na dia manja azy ireo aza izy ireo, ny varavarankely dia tsy miankina amin'ny tena, mankaleo ary azo vinavinaina isan'andro (ankoatry ny fisalasalana fa azo antoka, amin'ny haavon'ny tambajotra sy fiarovana, mila mahita fotsiny ianao ary mijaly amin'ny indostrian'ny Virosy sy Trojan izay ampiasain'ny governemanta sy ny mafia cyber ary izay nihalehibe teo ambany fiarovana na aloky ny Microsoft-Cacasoft). Lahatsoratra tsara sy feno. Ho ela velona Linux !!
Mamaly an'i carletes
Ny vahaolana ho an'ny zava-drehetra dia ny fanananao mpizara anao manokana sy ny fampiasana anao manokana, azonao atao ihany koa ny manana ny mailaka anao
[TIP] Ovaova ny kisary bateria peripheral ao amin'ny XFCE